Adaada Tiyyarra Jaalalli na Qabee! - Xalayaa Jaalalaa
Adaada Tiyyarra Jaalalli na Qabe!
02 Apr 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Maqaan kiyya Liiban Ahimad jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe Oromiyaa godina Baalee aana Gasgar magaala Gasgar jedhamutti dha. Ijoollummaa kiyyarra kaase hamma ofbaruutti magaala Gasgar keessatti maati koo waliin jiraacha ture. Barumsa kiyya kutaa 6ffaa gaafan xumuru abbaan kiyya fi haati tiyya sababaa jireenya fooyyefachuuf biyyaa nubaasanii gara biyya ollaatti nuun imalan.
Biyyi nutii itti baqannees Keniyaa jedhamti. Abbaan haadha tiyya, Akaakayyu kiyya biyya kana keessatti niitisaa lammaffaa waliin jiraacha jira. Innis yeroodhaaf akka nuti qubannu haala nuuf mijjeese ture. Waraqaa baqatummaa fudhanne akkuma baqatoota Oromoo biyya kana keessa jiraatan jiraachu jalqabne. Gaafa biyya turre maatin keenya baayye hiyeessa turan. Bara nutii biyyaa baanu akka lakkoofsa addunyaatti bara 2005 dha. Horiin abbaan koo dur qabaacha ture hundu sababaa hongeedhaaf nu harkaa du’anii turan. Lafti nuti qabaacha turres gurgurree qarshi isa lafaan gurguranneen waggaa lama nujiraachise. Birrii kuma shantamaa harkatti qabanne gaafa biyyaa baanu, daanga irratti poolisoonni nu sossodaachisaa nu doorsisaa nurkaa fuudhani.
Silas imimmaan hiyyeessa hin qooru. Akkuma biyya keessatti rakkachaa jiraacha turre biyya hambaa kana keessatti rakkachaa jiraacha jirra. Magaala gudditti Keeniyaa, Nayiroobi kan jedhamu keessatti harmeen koo shaayi gurguraa gali xiqqoo dhaan nujiraachisaa jirti. Abbaan kiyya dur barnoota amantaa waan qabuuf biyya kanatti carraa barsiisa amantaa ijoolle soomaleedhaaf hojjechaa jira. Garuu warri isa hojjechiisan yeroo tokko tokko miinda guutu hin laataniif. Ji’a tokko namaaf kafalani ji’a tokko immo, ji’a dhufuutti siif daballee sii kennina jedhanii abbaa kiyya sossobaa turan.
Osomaa kanaan jiraannu aniis mana barnoota mootumma galeen barachaa ture. Barataa cimaa fi dinqisiifatamoo ture. Ijoolle biyya kanaa fi barsisootni baayye natti hinaafa turan. Keessattu ijoollen Soomalee yeroo na argan hunda miila kiyya naqabani lafaan na darban. Aniis akkatti itti baradhuu dadhabee gaafa kutaa 8ffaa irra eebbifamu aniis barumsa koo dhiisen hafe. Biyya kanatti barnootni sadarkaan tokkoffa kutaa 8ffatti xumurama.
Anis barnoota ergan dhiise hadha tiyya gargaara ture. Gaafa ishiin shaayi baatte karaa deemtu aniis ishii gargaara ganama obboro barii irratti wajjiin deema ture. Guyyaa nutii odoo karaa irratti dhaabbannu kan shaayi hin gurgurrefaatu jira. Yeroo sana haati tiyya imimmaan haaqacha aniis ishii sossobaa manatti waliin galaa ture.
Haa ta’uyyu Akaakayyuun kiyya mana huchuu hodhan fi suphamu waan hojjetuuf achitti akkan isa gargaaru nagaafate. Aniis tole jedheen isaaf hojjechaa ture. Yoo xiqqaate ji’atti qarshii biyya kanaa shilingii kuma tokko naa kennaa ture.
Mana Hojii Keenya
Dubbiin dheeratef harretti hin fe’ani jedha Oromoon yeroo mammaaku. Akaakayyuun kiyya mucayyoo bareeddu tokko qaba. Mucaattin kunii fi haati tiyya obboloota masaanu waliif ta’ani. Mucattiin kun umrii dhan anaan hiriyaa taati malee anaa’ol ta’u hin dandeettu. Mana huchuu kanattis wajjumaan hojjanna. Anaaf garuu adaada akka taate sirritti naaf gala. Gaafa nyaata nyaannu, wajjiin nyaanna gaafa manatti gallus, waliin galla, wajjiinis taphanne qoosna. Nu jiddutti waan tokkoyyuu tasuma ni uumaa jedhee yaade hin beeku.
Yeroo natti maramtee taphattu miira addaatu qaama kiyya keessa dhaga’ama. Dhugaa isiniin jedha. Foolin isii baayye urgaa’a dha. Yeroo tokko tokko beekan shixxoo ofitti naqtee natti dhufti natti fakkaata. Nyaara kuulatti, ija ishiis gurraacheesite dhufti. Gaafa waliin hojjennu fuula ishii of babbareecha dhufti. Yeroo akkas taate dhuftu immo lapheen kiyya na keessa utaale bahuuf natti fakkaata. Mucattii kana anii maqaa ishiitin waame hin beeku. Adaadi jedheen waama. Yeroon ani Adaadi jedheen waamu ishiin ni aarti. “Lakki maqaa kiyyan nawaami adaadi nan jedhiin ani akkuma hiriyaa keeti malee adaada keeti mitii” nan jetti.
Maqaan ishii Mariyama dha. Maruu jedheen waama yeroo hunda. Akaakayyuun keenya yeroo suuqi nutti dhiisu anaaf ishii hojii dhiisnee oduu oofna. Ganama irra kaase hanga galgalatti suuta hojjechaa waliin kolfaa, waliin qoosa, walitti foggoraa oolla. Yeroon ani kolfu, ilkaan kee baayye bareeda jetteefa boqoo(maddii) kiyya nadhungatti. Hidhiin ishii gaafa boqoo kiyya tuqu qaamni kiyya guutu tarshaa jedha. Rifeensi qaama kooti akka gogaa adurretti natti dhaabbata. Dhugaa namni nun beekne yoo nu argu waan nuti jaalalle walii taanu itti fakkaata.
Osomaa akkanatti jiraannu gaafa tokko hojiin baayye nutti cimee akaakayyun keenya anaaf Maruu akka suuqi bullee hojjennu nu gaafate. Nutiis tole jennee bulle. Halkan sana dhugaa dubbachuuf huchu hedduu wajjiin hodhinee. Booda dhadhabnee rafuuf jennan firaashii tokko afanne irratti ciisne. Walitti siqnee wajjiin osoo haas’a jirru ani suuta morma ishii jala seeneen dhungadhe. Ishiinis seeqatte nan qirqirsiin jette kolfitii. Aniis irra deddeebi’een morma ishii dhungachaa ture. Booda ishiinis nadhungachuu eegalte.
Boodde boodde, dubbiitu dhufe. Qaamni saala kiyya akka eege sangaa fincooftutti natti dhaabbate. Akka tasaa ta’e ishiin utuu natti maramtuu qaama kiyya tasaan tuqte. Kan ana naa ajaa’ibu yeroo qaama saala koo akkasitti ol kaate argite maalif akka callistee hanga ammaa gaafi natti ta’e. Yeroo sana osoo ishiin ofirra achi na darbite ani qabee ishii walin qunnamtii saala hin raawwadhu ture. Sadarkaa maraatummas irra hin ga’u ture. Waan ani ishii hin goone hin jiru. Duburummaa akka qabaattes natti himtee turte. Akka dhoksaa dhan najaalacha turtes natti himaa turte.
Yeroo akkas wal goonu dhiiga ofirratti argiteetu achii utaaltee waan nuti raawwanne kanas iciiti anaaf ishii jidduu akka ta’e waada walii seenne. Garuu anii iciiti qabuu hin beeku baayye tokko ishii jaaladha. Guyyaa kanaa ala yeroo afur ol wajjiin rafnee beekna. Gaafa nutii suuqi bullu hunda wal qunnamtii saala osoo hin raawwatin bullee hin beeknu.
Ishiifis anaafis jaalala dhoksaa jaalala rabbiif safuu ta’e keessa jirra. Aniis ishiis wal malee akka jiraachu hin dandeenye wal amansiisneerra. Aada keenya keessattis ta’e amantaa keenya keessatti gochii keenya yoomiyyu gocha warra cubbama keessatti lakkaa’ama. Waan godhu dhabne. Baqannee baduuf eessa akka deemnu hin beeknu. Yoo hafne immo maatin keenya keessattu akaakayyun kiyya na ajjeesa. Dhoksinee jaalala dhoksaa kana wajjiin jiraachu hin danda’u baayye tokko ishii jaaladha garuu rabbiif safuu ta’e.
Ishii irra fagaachuu yaalan jira. Hojii sanas dhiisee amma mana nyaata tokko keessatti nyaata qopheessa jira. Erga anaaf ishii wal hin argine amma ji’a tokko guutuufi. Yeroo hunda waa’e ishii utuun yaadin bulee hin beeku. Kaleessa galgala bilbila koo irratti naa bilbiltee akkan dhufee suuqitti ishii ilaalu nagaafatte. Yeroo hunda ishiitu na dogoggorsiisa. Lakkii hin barbaadu osomaan jedhu kaleessas wajjiin rafeen ture.
Xalayaa kanas akka nagorsitaniif fuula keessanitti isiniif erge. Xalayaa kiyya kanas nama saalfachiisa jettanii yoo naaf maxxansuu dhiistan immo akkan adaada koo waliin jaalala dhoksa kana itti fufu barbaaddan jechuu dha. Silas waan safuu cabse haa ta’uyyu ani gorsa keessan qofa barbaada. Arrabsoos yoo naa arrabsitaniis naaf gala! Hunda caala akkan daandii sirritti deebi’u na gorsa! Ani maraadheera!
Retta Feyisa Guddeta
safuutu biyyaa badee salphinaaf sagallalee kan ilmi adaadaaf akkasiin maraatee. waan hundaafuu badiinke badiiko yoo akkasiin dogongorte sijibbuu hin qabu qaamakeetu qaamako dhiignikees dhiigako kanaafi sigorsuunko.
Elsai Mucaa Kakuu
Adaadaa Waliin Erga Jaalala Uumtee Obbolettii Kee Waliin Hin Deemin !
badiinke badiiko naanis nalaallataa, yoon sirratti callisee seenaan nagaafataa, irraa fagaadhu haadhoo hin nyaatiin galfataa, gaafa dhugaa dubbii dhalli sigaafata.
Gaaddisaa ilma Naasir
Duraan dursee sadarkaa barreessuu kee dinqisiifachuun barbaada… itti aansee wanti kun jaalala waan taheef uumamuu danda’a, garuu eenyu waliin akka tahuu qabuu dura itti yaaduu qabda. dursee uumamee yoo tahe yaada kee jirjiiruu qabda… jabaadhu barreeffamaaf garuu taateedhaaf rabbi kadhaadhu siif haa laaffisu!!!
ani waanan siin jedhu jaala;lli umamuu danda,a.kun cubbuu miti garuu hala kamiin kessaa akkaa baatu saaykooloojii gaafachuufii ofiikee tooftaa barbaaduun yookis rabbiin qixa sirriitti nadeebisi jettee kadhachuun immoo hundumaa caala.waan maraafuu iftoominakeefi dandeettii barreeffamakee hedduun ajaa,ibsiifadha.